October 7, 2019 by साहारा संदेश
केभी कुप्पम नामको स्थानमा सोमबार राती एउटा अचम्मको चीज आकाशबाट खस्यो । वरपरका मानिसहरू चकित भए । त्यस्तो दृश्य देखेपछि तिनीहरूले तुरून्त प्रहरीलाई खबर गरे । तत्काल पुलिस फोरेन्सिक विज्ञहरू सहित आए ।
रातो बत्ती झर्दै गरेको चीजमा बल्दै थियो । यी बत्तीहरू देखेर, मानिसहरू थप डराए । अनुसन्धान गरेपछि, त्यहाँ कुनै खतरा नभएको पत्ता लाग्यो । वास्तवमा जे परेको थियो त्यो मौसमको आँकलन गर्न डिजाइन गरिएको उपकरण थियो ।
यसलाई रेडियोडे भनिन्छ । जब फोरेन्सिक विज्ञहरूले अनुसन्धान गरे, उनीहरूले भने कि यो कुनै विस्फोटक होइन । एक प्रकारको उपकरण हो । यसमा एलईडी बल्बहरू थिए जुन निभाइएको थियो ।
जब उनलाई नजिकबाट हेर्यो, यो पाए कि गन्यु रेडियोसोंडेस यसमा लेखिएको थियो । यस कम्पनीले रेडियोसोड बनाउँछ । यी ब्याट्री द्वारा संचालित उपकरणहरू हुन् जुन प्राय मौसम बेलुन (मौसम जाँच गर्नका लागि बेलुन) सँग
जोडिएको हुन्छ र हावामा उडाइन्छ । त्यसपछि उनीहरू वातावरणमा विभिन्न दबाव र प्यारामिटरहरू परीक्षण गर्छन् । जस्तो तापक्रम कति हुन्छ ? कस्तो हावा चलिरहेको छ ? कती चाँडो बगिरहेको छ ? ओसिलोपना कति छ ? दबाब कति छ ? आदि कुराको जानकारी लिन यसको प्रयोग हुन्छ ।
Prevआखिरमा महरा पुगे मामाघर: यसरी लगियो महरालाई भिडियो हेर्नुहोस
Nextआमालाई बचाउँन खोज्दा छोराको पनि मृ*त्यु: आमा छोराको एकैदिन नि*धन